ဆိုင်ကလုန်းများ၊ အမျိုးအစားများနှင့်ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းနှင့်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းများ | ကွန်ယက်မိုးလေဝသ
ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်၌ဖြစ်ပေါ်သောမိုးလေ ၀ သဖြစ်စဉ်များအနက်မှအချို့သည်အထူးအာရုံစိုက်မှုကိုရရှိစေသည်။ ဆိုင်ကလုန်းများ။ အမျိုးအစားများစွာရှိပါသည်။ တစ်ခုစီတွင် ၄ င်းတို့၏ဝိသေသလက္ခဏာများပါ ၀ င်ပြီး၎င်းကိုလေးစားရမည့်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
သို့သော်သူတို့သည်မည်သို့ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသနည်း။ သင်သူတို့အကြောင်းအရာအားလုံးကိုသိလိုလျှင်, ဒီအထူးလက်လွတ်မ.
မိုးလေ ၀ သနှင့်ဇလဗေဒဆိုင်ရာအရဆိုင်ကလုန်းဆိုသည်မှာအချက်နှစ်ချက်ကိုဆိုလိုသည်။
လေထုဖိအားနိမ့်သောနေရာများတွင်ဖြစ်ပေါ်သောအလွန်ပြင်းထန်သောလေသည်။ သူတို့သည်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်လှည့်ပတ်စီးဆင်းနေပြီးများသောအားဖြင့်အပူပိုင်းဒေသကမ်းရိုးတန်းမှဆင်းသက်လာသည်။
မိုးရွာသွန်းမှုနှင့်လေပြင်းများတိုက်ခတ်သောလေထုဖိအားနိမ့်ကျခြင်း။ ၎င်းကိုမုန်တိုင်းအဖြစ်လူသိများပြီးရာသီဥတုမြေပုံများတွင်၎င်းကို“ B” ဖြင့်ကိုယ်စားပြုသည်ကိုသင်မြင်ရလိမ့်မည်။
anticyclone သည်ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်၍ ဖိအားမြင့်မားသောဒေသတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အားရာသီဥတုကောင်းမွန်စေသည်။
ဆိုင်ကလုန်းအမျိုးအစား ၅ ခုရှိသည်။
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် အနိမ့်ဖိအားစင်တာ (သို့မဟုတ်မျက်စိ) ရှိကြောင်းလျှင်မြန်စွာလှည့် whirlpool။ ၎င်းသည်ပြင်းထန်သောလေများနှင့်မိုးများရွာစေပြီးစိုထိုင်းသောလေထုငွေ့ရည်ဖွဲ့မှုမှ၎င်း၏စွမ်းအင်ကိုထုတ်ယူသည်။
၎င်းသည်များသောအားဖြင့်ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏အပူပိုင်းဒေသများတွင်ဖြစ်ပေါ်သည်အပူချိန် ၂၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိမှတ်ပုံတင်ထားသောပူနွေးသောရေနှင့်လေထုသည်အနည်းငယ်တည်ငြိမ်မှုမရှိသောအခါဖိအားနည်းသောစနစ်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
မြောက်ဘက်ခြမ်း၌၎င်းသည်နာရီလက်တံဆိပ်ကိုလှည့်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, တောင်ပိုင်း hemisphere အတွက်ကနောက်ပြန်လှည့်။ မည်သည့်ကိစ္စမျိုးတွင်မဆိုထုတ်လုပ်သည် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ကမ်းရိုးတန်းဒေသများသို့အကြီးအကျယ်ပျက်စီးခြင်း အရာအလှည့်အတွက်မုန်တိုင်းဒီရေနှင့်မြေပြိုမှုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
၎င်း၏အင်အားအပေါ် မူတည်၍ ၎င်းကိုအပူပိုင်းဒေသစိတ်ဓာတ်ကျမှု၊ အပူပိုင်းမုန်တိုင်း (သို့) ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း (သို့မဟုတ်အာရှတိုက်ရှိတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း) လို့ခေါ်ပါတယ်။ ရဲ့အဓိကအင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ကြရအောင်:
အပူပိုင်းဒေသစိတ်ကျရောဂါ- လေတိုက်နှုန်းသည်အများဆုံး ၆၂ ကီလိုမီတာ / တစ်နာရီဖြစ်ပြီး၊ ပြင်းထန်သောပျက်စီးမှုနှင့်ရေကြီးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အပူပိုင်းမုန်တိုင်း- လေတိုက်နှုန်း ၆၃ မှ ၁၁၇ ကီလိုမီတာအကြားရှိပြီးမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ရေကြီးမှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ လေပြင်းမုန်တိုင်းများတိုက်ခတ်နိုင်သည်။
ဟာရီကိန်းအပူပိုင်းဒေသမုန်တိုင်းအဆင့်ထက်ကျော်လွန်တဲ့အချိန်မှာဒီဟာကိုဟာရီကိန်းလို့အမည်ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ လေတိုက်နှုန်းသည်အနည်းဆုံး ၁၁၉ ကီလိုမီတာ / တစ်နာရီခန့်ရှိပြီးကမ်းရိုးတန်းများသို့ကြီးမားသောပျက်စီးမှုဖြစ်စေနိုင်သည်။
ဟာရီကိန်းများသည်ဆိုင်ကလုန်းများဖြစ်သည်။ အလွန်ပျက်စီးစေနိုင်သောကြောင့် ၄ င်းတို့ကိုသိရန်လိုအပ်သောအစီအမံများ ပြုလုပ်၍ လူ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုကိုရှောင်ရှားရန်
Saffir-Simpson Hurricane Scale သည်ဟာရီကိန်းအမျိုးအစားငါးမျိုးခွဲခြားသည်။
အမျိုးအစား 1: လေတိုက်နှုန်းမှာ ၁၁၉ မှ ၁၅၃ ကီလိုမီတာအကြားရှိသည်။ ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်ရေကြီးမှုနှင့်ဆိပ်ကမ်းများပျက်စီးခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အမျိုးအစား 2: လေတိုက်နှုန်းမှာ ၁၅၄ မှ ၁၇၇ ကီလိုမီတာအကြားရှိသည်။ ၎င်းသည်ခေါင်မိုးများ၊ တံခါးများနှင့်ပြတင်းပေါက်များအပြင်ကမ်းရိုးတန်းဒေသများတွင်ပျက်စီးစေသည်။
အမျိုးအစား 3: လေတိုက်နှုန်းသည် ၁၇၈ မှ ၂၀၉ ကီလိုမီတာအကြားရှိသည်။ ၎င်းသည်အဆောက်အအုံငယ်များ၊ အထူးသဖြင့်ကမ်းရိုးတန်းဒေသများရှိအဆောက်အအုံများကိုပျက်စီးစေပြီးမိုဘိုင်းအိမ်များကိုဖျက်ဆီးသည်။
အမျိုးအစား 4: လေတိုက်နှုန်းမှာ ၂၁၀ မှ ၂၄၉ ကီလိုမီတာကြားရှိသည်။ ၎င်းသည်အကာအကွယ်ပေးသည့်အဆောက်အအုံများကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပျက်စီးစေပြီးအဆောက်အအုံငယ်များ၏ခေါင်မိုးများပြိုကျကာကမ်းခြေများနှင့်လှေကားထစ်များလည်းတိုက်စားသွားသည်။
အမျိုးအစား 5: လေတိုက်နှုန်းသည်တစ်နာရီ ၂၅၀ ကီလိုမီတာထက်ပိုသည်။ ၎င်းသည်အဆောက်အအုံများ၏ခေါင်မိုးများကိုဖျက်စီးသည်။ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ရေကြီးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသောကြောင့်ကမ်းရိုးတန်းဒေသရှိအဆောက်အအုံများ၏အောက်ပိုင်းကြမ်းပြင်သို့ရောက်ရှိနိုင်ပြီးလူနေအိမ်ရာနေရာများကိုကယ်ဆယ်ရန်လိုအပ်နိုင်သည်။
သူတို့သည်ကြီးလေးသောပျက်စီးမှုဖြစ်စေနိုင်သော်လည်းအမှန်တရားမှာသူတို့လည်းဖြစ်သည် အလွန်အပြုသဘော ဂေဟစနစ်အတွက်ဥပမာ -
ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောလေများသည်သစ်ပင်များကိုဖုံးအုပ်။ သစ်ပင်များ၊ ဖျားနာနေသောသို့မဟုတ်အားနည်းသောသစ်ပင်များကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။
Stratropical ဆိုင်ကလုန်းများကိုလည်းလတ္တီတွဒ်အလယ်အလတ်ဆိုင်ကလုန်းဟုခေါ်သည်။ ကမ္ဘာ၏အလယ်လတ္တီတွဒ်များတွင်တည်ရှိသည်, အီကွေတာကနေ30ºနှင့်60ºအကြား။ ၎င်းတို့သည်စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်ဆိုင်သောဆိုင်ကလုန်းများနှင့်အတူကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်၌အချိန်ကိုရွေ့လျားစေသည်၊
သူတို့ကတစ် ဦး နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် အပူပိုင်းဒေသနှင့်ဝင်ရိုးစွန်းအကြားဖြစ်ပေါ်သောဖိအားနိမ့်စနစ်နှင့်အပူနှင့်အအေးလေထုအကြားအပူချိန်ဆနျ့ကငျြဘပေါ်မူတည်သည်။ သတိပြုသင့်သည်မှာလေထု၏ဖိအားကိုသိသာ။ လျင်မြန်စွာကျဆင်းပါက၎င်းတို့ကိုခေါ်သည် ပေါက်ကွဲ cyclogenesis.
အပူပိုင်းဒေသဆိုင်ကလုန်းသည်ရေအေးထဲသို့ဝင်ရောက်သည့်အခါဖြစ်ပေါ်နိုင်သည် ရေကြီးမှု o မြေပြိုခြင်း.
အဲဒါမုန်တိုင်းပဲ အပူပိုင်းဒေသ၏လက္ခဏာများနှင့် ပင်လယ်ပြင်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အပူပိုင်းဒေသမုန်တိုင်း Arani ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင်ဘရာဇီးနိုင်ငံအနီးတွင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးလေးရက်ကြာခဲ့သည်။ လေတိုက်နှုန်းမှာ ၁၁၀ ကီလိုမီတာ / မိုင်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်အပူပိုင်းမုန်တိုင်းဟုသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ အပူပိုင်းဆိုင်ကလုန်းများပုံမှန်အားဖြင့်မဖြစ်ပေါ်ပါဘူးရှိရာအတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ၏ကဏ္sectorတွင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်.
အာတိတ်ဆိုင်ကလုန်းဟုလည်းလူသိများသော၎င်းသည်အချင်းရှိပြီးအနိမ့်ဖိအားစနစ်ဖြစ်သည် 1000 နှင့် 2000 ကီလိုမီတာ။ အပူပိုင်းဒေသဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းများထက်ပိုမိုတိုတောင်းသောအသက်တာသည်၎င်း၏အမြင့်ဆုံးသို့ရောက်ရန် ၂၄ နာရီသာကြာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် လေဏု, အချင်း ၂ မှ ၁၀ ကီလိုမီတာအကြားရှိသော convective မုန်တိုင်းအတွင်း၌ဖြစ်ပေါ်သောလေသည်ဒေါင်လိုက် ၀ င်ရိုးတွင်တက်ပြီးလှည့်သည်။ ၎င်းသည်များသောအားဖြင့်မိုးကြိုးမုန်တိုင်းအတွင်းဖိအားနိမ့်ကျသည့်ဒေသနှင့်ဆက်စပ်နေပြီး၎င်းသည်ပြင်းထန်သောမျက်နှာပြင်လေနှင့်မိုးသီးကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
မှန်ကန်သောအခြေအနေများတည်ရှိပါက အတွက်ပရိုမိုးရှင်းနှင့်အတူတွေ့ရှိနိုင်ပါသည် supercellsလေဆင်နှာမောင်းသည်ကြီးမားသောလှည့်မုန်တိုင်းများသာဖြစ်သည်။ ဤမယုံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ရပ်သည်မြင့်မားသောမတည်ငြိမ်မှုအခြေအနေများနှင့်မြင့်မားသောအမြင့်တွင်လေပြင်းများဖြစ်ပေါ်သောအချိန်တွင်ဖြစ်ပေါ်သည်။ သူတို့ကိုကြည့်ရှုရန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ Great Plains နှင့်အာဂျင်တီးနား၏ Pampean Plains သို့သွားရန်အကြံပြုသည်။
ဤရွေ့ကား, ငါတို့နှင့်အတူအဆုံးသတ်။ ဒီအထူးကိုဘာတွေစဉ်းစားခဲ့တာလဲ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေ ၀ သဖြစ်ရပ်များ » ဆိုင်ကလုန်းများ » ဆိုင်ကလုန်းဆိုတာဘာလဲ